9 jirka noqonaya qofkii ugu da'da yaraa dunida ee jaamacad ka qalinjabiya ayaa ka hadlaya sida ay ugu suurtagashay - BBC News Somali
9 jirka noqonaya qofkii ugu da'da yaraa dunida ee jaamacad ka qalinjabiya ayaa ka hadlaya sida ay ugu suurtagashay
Laurent marka uu dugsiga hoose galayey wuxuu ahaa afar jir. Hase yeeshee carruurta ay isku da'da yihiin iyaga oo aan dugsi sare dhammeynin ayuu Laurent jaamacad ka qalin jabinayaa.
Wareysi uu BBC-da siiyayna wuxuu ku yiri: "Ma garanayo sababta guushan ii hoseedday".
ከበለስ ኤሌክትሪክ ለማመንጨት የምትመራመረዋ ኢትዮጵያዊት Sidee ku dhacday in ilmo Sagaal sano jir ah uu jaamacad ka qalinjabiyo?
Wiil Soomaaliyeed oo adeeg naadir ah u gudbiya bulshada
Lahaanshaha sawirka Laurent Simons
"Waxaan ku hamminayaa inaan sameeyo xubnaha jirka bani aadamka oo macmal ah, sida wadnaha, kalliyaha waxyaaba lagu baddali karo ama cimrigooda lagu dheereyn karo".
"Waxaan ogaannay in wiilkan yar uu hal abuur la yaab leh leeyahay", ayuu yiri aabbihii Alexander Simen.
"Isniinta casharrada caadiga ah marka uu fasalka ku qaato Talaadada wuxuu casharki la tagayaa qaybta Sheybaarka hal abuurka. Guriga marka uu tagana wuxuu akhrisanayaa 8 saacadood oo xiriir ah. Khamiistana macallinka ayuu codsi u gudbinayaa Jimcahana imtixaan ayaa laga qaadaa", ayuu yiri aabbihii oo xaaladda wiilkiisa ka warbixinayay.
Ardayda kale iney casharrada noocaasi ah xifdiyaan waxay ku qadaneysaa 9 - 12 usbuuc isagana wuxuu ku dhammeynayaa shan malmood oo keli ah.
Ardayda ay Laurent isku fasalka yihiin laba jibbaar ayey da' ahaan ka ka weyn yihiin, sidaa darteed wuxuu waxbarashada si gaar ah ugu qaataa fasal kale oo isaga si gaar ah loogu diyaariyey.
Aabbihiina wuxuu sheegay sida carruurta la da'da ah malaha wakhti uu ku ciyaaro, qoyskiisana wax cadaadis ah ma saaraan.
Ugu dambeyntiina wuxuu aabbihii yiri: "Laurent wax kasta oo uu yiraahdo waan sameynayaa weligii isaga oo aan samen ma joogin".